> Resource > iPad > Transfer Videos hawada iPad in Computer si sahlan
Hayso videos badan si aad brand hawada cusub iPad, laakiin hadda aad rabto in aad u dhoofin bilaash ah ilaa meel lagu kaydiyo ama u daawado kombiyuutarka? Nasiib darro, Lugood shaqaysaa si fiican syncing videos in hawada iPad, laakiin waa ciirsi si ay u gudbiyaan videos hawada iPad in computer, marka laga reebo kuwa ku iibsaday. Taasi macnaheedu waa in aad u baahan tahay si aad u ogaato wax kale si ay u caawiyaan, marka videos ku saabsan hawada iPad yihiin goolka ka ilo kale.
Si aad u qabtaan video hawada iPad kala iibsiga leh hab ammaan ah oo degdeg ah, ee aadka Waxaan ku talinaynaa in iPad kala iibsiga qalab - ka TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) . Waxay kaa caawin karaan ayaad ugu wareejiyo oo dhan videos, waxaad tidhaahdaan, filimada, Lugood U, podcasts, bandhigyada TV, videos music video iyo shot la hawada iPad u computer iyo Lugood.
Hoos waxaa ku qoran waa Hanuunki faahfaahsan oo ku saabsan suuqa kala iibsiga video la version Windows. Users Mac aad u raaci karaan Hanuunka. Hadda, dejisan ee Windows ama Mac Version kombiyuutarka. Markaas, iskaan Hanuunka.
Tallaabada 1. Orod software iyo xiriiriyaan hawada iPad
Connect aad iPad Air in computer via cable USB. Si dhakhso ah loo soo dajiyo iyo ordi software-ka kombiyuutarka. Markaas, aad arki doonaa adiga iPad Air info oo muujinaya in uu furmo suuqa hoose ee software.
Fiiro gaar ah: Ka sokow hawada iPad, software this sidoo kale taageertaa tusaalayaal kale ee iPad. Waxa ay iPad mini la isha bandhigay, mini iPad, iPad 2, iPad bandhigay isha, iPad New iyo iPad.
Tallaabada 2. Transfer iPad videos in computer
Sida uu na tusay in column ka tagay ee suuqa hoose, dhammaan faylasha on your iPad Air waxaa loo kala saaraa fayl kala duwan, sida Media , Playlists , Photos , Xiriirada> iyo SMS . Just u tag Media . Daaqadda ku cad xaq, waxaad ka arki kartaa videos waxaa lagu kaydiyaa nooc oo kala duwan.
Guji mid ka mid category, sida Movies . Daaqadda filimka, sax filimada in aad jeceshahay in aad dhoofin. Markaas, guji dhoofinta in in filimada laga hawada iPad wareejiyo computer. Haddii aad rabto inaad u guurto filimada si ay Lugood, waxaad sidoo kale riixi kartaa Smart dhoofinta in Lugood ama guji saddexagalka yar hoos dhoofinta in ay doortaan iyo dhoofinta in Lugood Library liiska jiido-hoos.
Sidaas, waxaad filimada, podcasts, music videos, Lugood U carwooyin iyo TV in computer wareejin karaa hawada iPad fudayd.
Fudud, miyaanay ahayn? Software runtii shaqo fiican kaga dayanayaan in Windows PC iyo Mac videos hawada iPad. Videos sokow, aad awood u dhoofiyaan music, sawiro, xiriirada aad iPad si aad u computer.